အမေးအဖြေများ - Jinyun လက်ဝတ်ရတနာ Co. , Ltd
ကျနော်တို့သံမဏိလက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရွဲစွန်ခံများမှာ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ moq, အရွယ်အစားနှုန်းဒီဇိုင်းနှုန်း3PCs USD 300 ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ဖို့နမူနာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, သင်ကအနည်းဆုံး USD 100 အမိန့်ပေးနိုငျသျောလညျး, အရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ် 1 ကီလိုဂရမ်လောက် USD 30 ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အမြဲသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လက်ပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အချိန်မီယုံကြည်, ငါတို့ဖောက်သည်ကျေနပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုပြုလိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများ, မှတ်ချက်များ, ဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အသင်းဝင်အဆင့်: (သင့်အလို့ငှာငွေပမာဏ accoring, သင်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့် disccount ပျော်မွေ့မည်)
ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပို. ပို. အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီအမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချိန်အတွက်အမှာစာများလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်သေချာအောင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုချိန်ညှိ။
, 12:00 မွန်းတည်မတိုင်မီပြီးသားပေးဆောင်နေကြသမျှသောသစ်ကိုအမိန့်အဘို့ကျနော်တို့ကစီစဉ်မည်ဖြစ်ပြီးထိုနေ့မှာစတော့ရှယ်ယာစစ်ဆေးတိုင်းနံနက် 1 ။
သငျသညျ 12:00 မွန်းတည်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုစေလျှင်, ငါတို့သည်ကြောင့်စီစဉ်များနှင့်နောက်နေ့အတွက်စတော့ရှယ်ယာစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
2. သင်ထုပ်ပိုးစာရင်းလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်သည် 6:00 pm အချိန်မတိုင်မီနောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည်တူညီတဲ့ညဦးယံ၌အမိန့်ထုတ်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ 6:00 pm တွင်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုစေလျှင်, ငါတို့သည်နောက်နေ့အတွက်အမိန့်ထုတ်တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ 12:00 မွန်းတည်မတိုင်မီချိန်ခွင်လျှာပြီးပါကအဘို့အလို့ငှာထည့်သွင်းရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်ပြီးသားပေးဆောင်နေကြရသောအမိန့် 3.For, ငါတို့သည်တူညီတဲ့ညဦးယံ၌သင်တို့ကိုနောက်ဆုံးထုပ်ပိုးစာရင်းပေးပို့မည်နောက်နေ့အတွက်အမိန့်ထုတ်တင်ပို့မည်။
သငျသညျ 12:00 မွန်းတည်ပြီးနောက်လက်ကျန်ငွေဖြည့်များအတွက်ဖြည့်စွက်အမိန့်ရာ၌ခန့်ထားပြီဆိုပါက, ငါတို့သည်ဖြည့်စွက်အမိန့်စီစဉ်နှငျ့သငျမှနောက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးထုပ်ပိုးစာရင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်အမိန့်မနက်ဖြန်အပြီးထွက်တင်ပို့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
paypal အကောင့်: julong@julongsteeljewelry.com
အကျိုးခံစားဘဏ်အမည်: HSBC က
ကုမ္ပဏီအမည်: Jinyun ကုန်သွယ်ရေးလီမိတက်
ဘဏ်အကောင့်ကိုအဘယ်သူမျှမ။ : 801406885838
အကျိုးခံစားဘဏ်: 1 ဘုရင်မကြီးရဲ့လမ်းအလယ်ပိုင်း, ဟောင်ကောင်
SWIFT Code ကို: HSBCHKHHHKH
ငါတို့အားဖြင့်အမိန့် items EMS သို့မဟုတ် TNT သို့မဟုတ် DHL သို့မဟုတ် FedEx သို့မဟုတ် UPS အားဖြင့်တင်ပို့နေကြသည်။
ကျနော်တို့ကအမြန်ကုမ္ပဏီကနေရလာသောအခါငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီသင့်ရဲ့အမိန့်ထုတ်တင်ပို့နေသည်အဖြစ်က e-mail ဖြင့်ခြေရာခံခြင်းအမှတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ကုန်သွယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3-5 ရက်ကြာအရာတံခါးဝစံ Air ကို-အမြန်တံခါး, ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလပ်ရက် မှလွဲ. တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ရန်, နေ့တိုင်းထွက်တင်ပို့နေကြသည်။ တနင်္ဂနွေပေါ်တွင်အမိန့်ကိုအောက်ပါတနင်္လာနေ့တင်ပို့လိမ့်မည်နေစဉ်ရက်အပေါ်ထားရှိအများစုကအမိန့်,2သို့မဟုတ်3ရက်အတွင်းတင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ခြေရာခံအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူ e-mail ကိုအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ခြေရာခံအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိနှစ်ဆယ်လေးနာရီပြီးနောက်, သငျသညျမှာအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါလိမ့်မည်
Delivery အချိန်လိုရာခရီးရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတံခါးကို-to-တံခါးကိုပေးပို့ပေး DHL, UPS, FedEx နှင့် TNT: jinyun လက်ဝတ်ရတနာအားလုံးကြီးတွေလေးရေကြောင်းကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုင်အခဲမိတ်ဖက်ညျဆောကျခဲ့သညျ။
items သငျသညျအထဲက check လုပ်ထားပြီးနောက်အောက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌ထုတ်တင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကကွဲပြားခြားနားပေးပို့ပေါ် မူတည်. ပေးပို့ဘို့အကြောင်းကို 3-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းယူစခွေငျးငှါသငျသညျကို select ကိုဆိုလိုသည်။ ကြှနျုပျတို့မှားသို့မဟုတ် undeliverable လိပ်စာတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ရေကြောင်းလိပ်စာမှန်ကန်သောနှင့်ပေးပို့ဖြစ်ပါသည်သေချာပါစေ။
ငါတို့သည်သင်တို့မောက်၏ကလစ်မှာသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင့်ရဲ့တင်ပို့အတည်ပြုခဲ့သည်သောအခါ, သင်သည်သင်၏အတည်ပြုချက်ကို e-mail, တစ်ဦးခြေရာခံခြင်းအရေအတွက်ကလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ကြှနျတေျာ့ကို item ငါ့ကိုရောက်ရှိဖို့အဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူကြမည်နည်း
စနေနေ့, တနင်္ဂနွေနှင့်ပြည်သူ့အားလပ်ရက်ဖယ်ထုတ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း, ပို့ဆောင်မှုကာလ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တွက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကဖြန့်ဝေဘို့အကြောင်းကို 3-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းကြာပါသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ check လုပ်ထားထွက်ကြပြီးနောက်လာမည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်နေ့တာ၏အဆုံးမတိုင်မီသင်၏ဝယ်ယူမှုတင်ပို့မည်။ သင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော '' က်ဘ်ဆိုက်မှာသင့်ရဲ့ပေးပို့များ၏တိုးတက်မှုကိုစစျဆေးနိုငျဒီတော့ကျနော်တို့ခြေရာခံအရေအတွက်ကိုနဲ့ e-mail ပို့လိမ့်မယ်။
လွတ်ရန်သင့်ကို item 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းမှတက်ခွင့်ပြုပေးပါ။ ကတုန်းပဲရောက်လာမပါဘူးဆိုရင်, ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် "ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိပါ။ ကျနော်တို့အလျင်အမြန်ပြန်သင်ရလိမ့်မယ်။